ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းများနှင့်ခန့်မှန်းချက်များ Martech Zone
ကပ်ရောဂါကာလအတွင်းကုမ္ပဏီများ၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများသည်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ၊ စားသုံးသူ ၀ ယ်လိုအားအပြုအမူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်စပ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းသိသိသာသာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်အမြင်အရအကြီးမားဆုံးစားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများသည်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်း၊ အိမ်အရောက်ပို့ခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုတို့ဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နည်းပညာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၀ န်ထမ်းနည်းသော၊ ပိုများသောလမ်းကြောင်းများနှင့်ကြားခံနယ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများကိုတိုင်းတာရန်၊ စကေးနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းအရအသွင်ပြောင်းရန်နည်းပညာကိုအလွန်မှီခိုအားထားရန်လိုအပ်သည်။ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည်အတွင်းပိုင်းအလိုအလျောက်နှင့်ပြင်ပဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုအာရုံစိုက်သည်။ လျင်မြန်သောအချက်အချာနှင့်လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲနိုင်သောကုမ္ပဏီများသည်စျေးကွက်ဝေစုသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။ မရှိသောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့သောစျေးကွက်ဝေစုကိုပြန်ရယူရန်ရုန်းကန်နေရတုန်းဖြစ်သည်။
M2 On Hold အဖွဲ့သည်အချက်အလက်များမှတဆင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ ၉ ခုကိုအဓိကထားသော infographic တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
၎င်းသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအလျင်မြန်ဆုံးလုပ်ငန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်သည်အဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသည်။ ဤအရာရှိသော်လည်းခေါင်းစဉ်လမ်းကြောင်းများပေါ်ထွက်လာပြီးစျေးကွက်ကိုမောင်းနှင်ရန်အဓိကအင်အားစုများကိုပြသသည်။ ဤဘလော့ဂ်သည် ၂၀၂၀ ၏အလားအလာခန့်မှန်းချက်များကို infographic ကိုးကားလမ်းညွှန်တစ်ခုနှင့်ပြန်လည်ဖော်ပြသည်။ စာရင်းအင်းများနှင့်အချက်အလက်များနှင့်အတူပလက်ဖောင်းများ၊ နည်းပညာ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ခြင်းတို့တွင်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လ၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုးချက်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
M2၊ ၂၀၂၀ ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်လမ်းကြောင်း ၉ ခု
AI-Powered Chatbots - chatbots သည်စားသုံးသူ ၀ န်ဆောင်မှုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု၏ ၈၅% ကိုအားဖြည့်ပေးလိမ့်မည်။ ခေတ်မီဆန်းသစ်သောကုမ္ပဏီများသည်အတွေ့အကြုံနှင့်စိတ်ပျက်မှုကိုဖယ်ရှားရန်သင့်တော်သောလူအတွင်းပိုင်းသို့ချောမွေ့စွာကူးပြောင်းနိုင်သော chatbots များကိုလက်ခံသည်။
personalization - နေ့တွေကုန်ဆုံးသွားပြီ ချစ်ခင်ရပါသော %% ပထမအမည် %%မရ။ ခေတ်သစ်အီးမေးလ်နှင့်စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းများသည်အပိုင်းခွဲခြင်း၊ အပြုအမူနှင့်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ခန့်မှန်းသောအကြောင်းအရာများနှင့်အလိုအလျောက်စာပို့ခြင်းကိုအလိုအလျောက်တိုးတက်စေရန်စမ်းသပ်မှုများပါ ၀ င်သည်။ သင်ဟာအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးစျေးကွက်တစ်ခုကိုပေါက်ကွဲနေသေးရင်၊ သင်ဟာရောင်းအားနဲ့လမ်းလွဲနေတယ်။
လူမှုမီဒီယာပေါ်တွင်ဇာတိ eCommerce - (စအဖြစ်လူသိများ လူမှုရေးစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး or Native စျေးဝယ်) စားသုံးသူများသည်ချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံကိုလိုချင်။ ပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းသည်ချောမွေ့စွာဒေါ်လာနှင့်တုံ့ပြန်သည်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတိုင်းနီးပါး (မကြာသေးမီကဖြစ်သည် TikTok) ကုန်သည်များသည်လူမှုရေးနှင့်ဗွီဒီယိုပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်ပရိသတ်များကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်စေရန် ecommerce ပလက်ဖောင်းများကိုပေါင်းစည်းနေသည်။
GDPR သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသွားသည် သြစတြေးလျ၊ ဘရာဇီး၊ ကနေဒါနှင့်ဂျပန်တို့သည်သုံးစွဲသူများအား theri ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမည်သို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီယားပြည်နယ်မှအောင်မြင်သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားစားသုံးသူ privacy ကိုအက်ဥပဒေ (CCPA၂၀၁၈) တွင်ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများဘက်စုံလုံခြုံရေး၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်အပိုဆောင်းထိန်းချုပ်မှုများကိုလိုက်လျောညီထွေနှင့်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ရသည်။
Voice ကိုရှာရန် အသံဖြင့်ရှာဖွေခြင်းသည်အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုအားလုံး၏ထက်ဝက်ခန့်နှင့်အသံရှာဖွေမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းကိရိယာများမှစမတ်စပီကာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ အသံဘားများနှင့်အခြားကိရိယာများသို့ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ virtual လက်ထောက်များသည်တည်နေရာအခြေပြုကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ရလဒ်များနှင့်ပိုမိုတိကျလာသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုဂရုတစိုက်ထိန်းသိမ်းရန်၊ ၎င်းအားစုစည်းရန်နှင့်ဤစနစ်များသို့သုံးနိုင်သောနေရာတိုင်းသို့ဖြန့်ဝေရန်ဖိအားပေးသည်။
ပုံစံရှည်ဗီဒီယို - အာရုံစူးစိုက်မှုတိုသည် အခြေခံအချက်များသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးများကိုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းသိသိသာသာထိခိုက်စေနိုင်သောအခြေခံဒဏ္ာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတောင်မှအဲဒါကိုကျသွားတယ်၊ သတင်းအချက်အလက်အတိုအထွာတွေပိုများလာအောင်လုပ်ရတာကိုအားပေးတယ်။ အခုငါ့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဂရုတစိုက်စုစည်းထားတဲ့၊ စေ့စပ်သေချာတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့စာကြည့်တိုက်တွေကိုဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးဝယ်သူတွေကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလတ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးမှာပါ။ ဗီဒီယိုသည်မကွဲပြားပါ၊ စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေး ၀ ယ်သူများသည်မိနစ် ၂၀ ထက်ပိုသောဗီဒီယိုများကိုစားသုံးကြသည်။
စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်များမှတစ်ဆင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း - ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတစေအဆက်အသွယ်ရှိနေသောကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမက်ဆေ့ဂျ်များကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီစာတိုပေးပို့ခြင်းသည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ ဘရောင်ဇာအကြောင်းကြားချက် (သို့) ဆိုက်အတွင်းအကြောင်းကြားချက်များဖြစ်စေ ... စာတိုပေးပို့ခြင်းသည်အဓိကအချိန်နှင့်တပြေးညီဆက်သွယ်မှုကြားခံတစ်ခုအဖြစ်နေရာယူလာသည်။
တိုးချဲ့ Reality နှင့် Virtual Reality - AR & VR မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် browser ၀ ယ်သူအပြည့်အ ၀ အတွေ့အကြုံများတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ မင်းရဲ့နောက်ထပ်ဧည့်သည်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာ virtual world ဘဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့ဧည့်ခန်းမှာဘယ်လိုပရိဘောဂအသစ်တွေဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတာမိုဘိုင်းလ်အက်ပလီကေးရှင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီတွေကငါတို့ရဲ့လက်ဖဝါးကနေရရှိနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတည်ဆောက်နေတယ်။
ဉာဏ်ရည်တု - AI နှင့်စက်သင်ယူခြင်းသည်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်၊ စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန်နှင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံများကိုယခင်ကထက်ပိုကောင်းအောင်ကူညီပေးသည်။ စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့အားတွန်းအားပေးနေသောထောင်ပေါင်းများစွာသောစျေးကွက်သတင်းစကားများကိုငြီးငွေ့လာကြသည်။ AI သည်ကျွန်ုပ်တို့အားသက်ရောက်မှုအရှိဆုံးဖြစ်သည့်အခါပိုမိုအစွမ်းထက်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ကူညီနိုင်သည်။
အောက်ပါ infographic တွင် ၂၀၂၀ မှခေါင်းစီးလမ်းကြောင်းကိုးခုကိုရှာဖွေပါ။ ဤလမ်းညွှန်သည်ဤလမ်းကြောင်းများသည်စျေးကွက်နှင့်၎င်းတို့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုထုပ်ပိုးထားသည်။
Tags: aiai chatbots ပါဉာဏ်ရည်တုchatbotsအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေတ်ရေစီးကြောင်းအီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေတ်ရေစီးကြောင်းFacebook ကinfographicစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေတ်ရေစီးကြောင်းမိုဘိုင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းဇာတိစျေးဝယ်သဘာဝဘာသာစကားအပြောင်းအလဲနဲ့nlpကိုယ်ပိုင်personalizationPinterestရာထူးခန့်မှန်းချက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း personalizationsegmentSnapchatလူမှုရေး commerce ကိုလူမှုမီဒီယာလူမှုမီဒီယာခေတ်ရေစီးကြောင်းTikTok
Ecamm Live - Live Streamer တိုင်းအတွက်ရှိရမည်
ဇန်နဝါရီ 17, 2014 မှာ 7: 38 AM
သင့်ဘလော့ဂ်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အင်ဖိုဂရပ်ဖစ်များ၏ အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်ဘလော့ဂ်၏ ဆောင်းပါးတိုင်းကို ကျွမ်းကျင်စွာ ရေးသားပြီး ကောင်းမွန်စွာ ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ဗဟုသုတဖြစ်စေသော infographics များကိုမျှဝေသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဇန်နဝါရီလ 20 ရက် 2014 ခုနှစ် ညနေ 11 နာရီ 36 မိနစ်
Douglas Karr ! တကယ်ကို ဗဟုသုတရစရာလေးမို့ မျှဝေတာပါ။ အကျိုးအမြတ်များသော ဒီဇိုင်းများ၊ အကြံဥာဏ်များဖြင့် သင့်အား အပေးအယူလုပ်ခဲ့သည်။ ထပ်ပြီး ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
12:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 7, 35
နှစ်သစ်သည် ကြီးမားသောဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုမိုပြင်းထန်လာသော အွန်လိုင်းရှုခင်းကို ၎င်းနှင့်အတူ ယူဆောင်လာပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသည် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသော်လည်း ၎င်းသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းစေသည်။
12:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 7, 44
ဟုတ်တယ်၊ အမှန်က စုပ်ယူခံရမယ့်အရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါတောင်းဆိုထားတဲ့ အတွေးတွေကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် နှစ်စဉ်ကြိုးစားနေတာ
တစ်နှစ်တာအတွက် apple of agenda business နှင့် ecommerce တို့တွင် အရေးကြီးပါသည်။
မတ်လ 21, 2014 မှာ 8: 00 AM
တကယ်ကို ဗဟုသုတရစေတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။ ဒါက တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုပါ။ သင့်ဘလော့ဂ်တွင် အချက်အလက်များစွာ ထည့်ထားသည်။ ဤတန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်ကို မျှဝေသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တကယ်လည်း အသုံးဝင်ပြီး မှတ်သားစရာပါ။
30:2014 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 23
မင်္ဂလာပါ Douglas အကြံပြုချက်တွေက အရမ်းကောင်းတယ်။ ဆက်တင်ပါ။
သြဂုတ်လ3ရက် 2014 ခုနှစ် 1:02 နာရီ
အလွန်အသုံးဝင်သော Infographic Douglas။ အခုဆို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းက ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေ နီးပါးဟာ သူတို့ရဲ့ အလုပ်ကိစ္စအားလုံးအတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာကို ပိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာ အခုမှ သိလာရတယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
7:2020 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 52
အကြံပြုချက်များသည် စိတ်ကူးကောင်းများဖြစ်သည်။ ဆက်တင်ပါ။
7:2020 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 53
သြဂုတ် 25, 2021 မှာ 6: 48 AM
ဤအကြောင်းအရာသည် ၂၀၂၁ တွင်ထိရောက်မှုရှိပါသလား။
သြဂုတ်လ 25 ရက် 2021 ခုနှစ် 12:21 နာရီ
မင်္ဂလာပါ John၊ 2014 ခုနှစ်၏ ခေတ်ရေစီးကြောင်းများသည် အိမ်မှအလုပ်လုပ်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းပစ္စည်းများမှ ဈေးဝယ်သူများရှေ့သို့ တွန်းပို့နေပြီဟု ရိုးရိုးသားသားပင် ပင်မရေစီးကြောင်း ထင်ပါတယ်။
M2021 On Hold မှ ကောင်းမွန်သော infographic နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် ဤပို့စ်ကို2ခုနှစ်အတွက် အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် သင်သည် ကျွန်ုပ်အား လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပါသည်။
3:2021 pm မှာနိုဝင်ဘာ 6, 29
ထူးချွန်ပြီး ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သူပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်… မင်းဆီကနေ နောက်ထပ်လေ့လာဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။